Nofeembar 19 , 2020
Bishii Oktoobar 31, ardayda MHS waxay keeneen wadahadal TED ah hoolka dugsiga sare oo leh sannadle saddexaad ee TEDxYouth @ MinnetonkaHS. Dulucda munaasabadda sannadkan waxay ahayd "Dib-u-qeexidda Guusha," waxaana loogu talagalay in lagu bixiyo aragti cusub oo ku saabsan siyaabaha kala duwan ee guusha loogu gaari karo sheekooyinka shan qof oo hadlaaya oo waxbixinno ka dhiibtay maalintii oo dhan.
Emil Liden, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan MHS, wuxuu ahaa hogaamiyaha abaabulka ka dambeeya dhacdada TEDx. Bilowgii gugii hore, wuxuu kulamo la qaatay maamulaha MHS iyo qabanqaabiyihii sanadkii hore, Jai Chadha, '20, si loo go'aamiyo mowduuca munaasabadda, la isugu geeyo koox qorshayn ah, oo loola xiriiro kuwa hadla, dhammaantood la qorsheeyey iyadoo la ilaalinayo tallaabooyinka badbaadada COVID-19 maskaxda.
Emil iyo qabanqaabiyeyaashii kale waxay go'aansadeen inay qabtaan dhacdo isku dhafan oo kaqeybgalayaashu uga soo qayb geli karaan shakhsi ahaan ama ku dhowaad iyagoo galaya barta tooska ah ee YouTube. Kuwii qof ahaan kasooqeybgalay ayaa lagufaafiyay hoolka weyn waxaana lasiiyay maaskaro TEDx loo habeeyay. In kasta oo ay jirto caqabado dheeraad ah oo isku dubbaridka labadaba shakhsi ahaan iyo dhacdooyin toos ah, kooxdu waxay u aragtay maalinta guul.
"Qeybtii aan ugu jeclaa dhacdada sanadkan waxay ahayd inaan arko muuqashada dhammaan shaqooyinkii adkaa ee aan soo qabanay toddobadii bilood ee la soo dhaafay oo nool saacado kooban gudahood," ayuu yiri Emil. "Markii aan arkay kaqeybgalayaasha imanaya iyo kuwa kale oo soo galaya Youtube-ka tooska ah, waxaan dareemay farxad aad u weyn in waxaas oo dhami ay dhacayaan oo aysan kaliya aheyn riyo waalli ah. Waxaan u maleynayaa in safka dadka ku hadla afafka aan heysanay aan la mid aheyn, iyo wadahadalada waxay bixiyeen dhiirigelin.
Khudbadihii sanadkan waxaa ka mid ahaa Jenni Lilledahl, oo ah milkiilaha tiyaatarka majaajillada cusub ee Brave New Workshop; Dymanh Chhoun, oo ah sawir qaade ka socda WCCO; iyo Norah Long, oo ah atariisho ka socota Magaalooyinka Mataanaha ah isla markaana ah aasaasaha macaashka aan caadiga ahayn ee loo yaqaan 'Common Table South'. Intaa waxaa sii dheer, macallinka Ingiriisiga ee MHS, Judith Thomas, iyo sare Peyton Crest oo dugsiga sare ka tirsan ayaa iyaguna soo bandhigey. Khudbad kastaa wuxuu kahadlayay sida guusha iyo guuldaradu door ugulahaayeen noloshooda, waxayna ardayda usoo jeediyeen talooyin ku saabsan sida guul looga gaari karo dhibatooyinka jira.
“Marwalba waxaan dhahaa xitaa haddii hal qof kaliya wax uun ka helay dhacdada, waa guul” ayuu yiri Emil. "Waxaan u maleynayaa ardayda maskaxdooda iyo qalbiyadooda inay u furmeen siyaabaha kala duwan ee guusha noloshooda ugu suurta geli karto. Guul darradu waxay fursad u noqon kartaa inaad koro, waxbarto oo aad qaadatid waddo cusub oo kuu horseedi doonta himilooyinkaaga. "
Emil agtiisa, ardayda kale ee MHS ee ku lug lahaa qorshaynta iyo fulinta dhacdada TEDx waxay ahaayeen Jonathan Presson, oo duubay fiidiyowga; Sam Boime, oo sawirro ka qaaday; Scott Sorenson iyo Ava Chen, kuwaas oo isku dubariday saadka; iyo Steven Wang iyo Priscilla Bunday oo iyagu hogaaminayey miisaaniyada iyo maalgalinta. Senior Alex Armstrong iyo xubin ka tirsan shaqaalaha Nathan Humason ayaa door gaar ah ka ciyaaray maaraynta codka iyo tooska loo daawado.
Dugsiyada Minnetonka waxay si weyn ugu qaylinayaan qabanqaabiyayaashan, kuwa hadlaya, iyo dhammaan xubnaha ku lugta leh isu imaatinka si ay ardayda ugu diraan fariin dhiirrigelin ah.